Wasiirka Waxbarashada Puntland oo ka maqnaa wadahadalkii Garowe
GAROWE 2 May 2015 (GO)- Wasiirka waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame ayaa waxaa uu ka maqnaa wadahadaladii dowlada Puntland kala xaajooneysay dowlada federaalka mustaqbalka gobolka Mudug labadii maalmood ee la soo dhaafey isaga oo ka dhoofey magaalada Garowe maalmo ka hor inta uusan waftiga madaxweynaha Somalia soo gaarin magaalo madaxda.
Cali Xaaji Warsame oo kamid ah wasiirada ugu tunka wayn ee kasoo gala gobolka Mudug xukuumada madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas ayaa wararku xusayeen in guddiga dowlada Federaalka uga qayb galayey wadaxaajoodka si joogta ah u waydiiyeen xubnaha Puntland halka Wasiirka waxbarashada Puntland ku maqan yahay.
Mud. Cali Xaaji oo safaro isadaba-joog ah horey ugu tagey magaalada Muqdisho inta uu xilkaan hayey ayaa la rumeysan yahay in xiriir dhow la leeyahay madaxda dowlada Federaalka.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas iyo guddiga wadaxaajoodka u matalyey shirka wadatashiga labadii maalmood ee lasoo dhaafey ayaa la rumeysan yahay in wadahadal adag la galeen madaxweynaha dowlada Federaalka iyadoo habeenkii xaley wararku xusayaan inuu kulankaan qarka u fuuley burbur kadib markii madaxweyne Xasan Shiikh diidey aqoonsiga heshiisyadii Puntland la gashey xukuumadiihii isaga dambeyey magaalada Muqdishu.
Madaxweynayaasha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan iyo Jubaland ayaa wararku sheegayaan in wadahadalka soo kala dhexgaleen goor dambe ee xaley kuwasoo meel dhexe wax isugu keeney.
"Puntland waxaa xilalka lagu qaybsadey awood qaybsi gobolada ay ka kooban tahay hadii Wasiir Cali Xaaji ka safrey wadaxaajoodka ku wajahnaa mustaqbalka Mudug ma aha arin la soo dhoweyn karo, sababtoo ah waxaa kulankaan lagaga hadlayey arin muhiim u ah jiritaanka Puntland iyo gobolka Mudug." sidaas waxaa u sheegey GO sarkaal ka tirsan dowlada Puntland oo ka gaabsadey in magaciisa xusno.
Wasiirka waxbarshada Puntland oo ku sugan wadanka Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafey saxaafada kala hadley shirka uga socda magaalada Cadaado beelaha ka socda Koonfurta Mudug iyo Galkagaduud.
Kulanka wadatashiga uga socdey magaalada Garowe dowlada Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlada Federaalka ayaa dhamaadey maanta kasoo laga soo saarey warmurtiyeed lagu cadeeyey mowqifka dowlada Xasan Shiikh ee ku aadan gobolka Mudug. HALKAN KA AKRISO